ကိုယ့်ဆုတောင်းတွေမြန်မြန်ပြည့်ဖို့ ကံကောင်းစေတဲ့လက်ဆောင်လေးတွေ သုံးကြည့်ပါ – Trend.com.mm
ဆုတောင်းတိုင်းပြည့်လား??လူတိုင်းက ဘ၀မှာအနည်းဆုံးဆုတစ်ခုလောက်တော့တောင်းဖူးကြမှာပါပဲ။ဖြစ်လာတာ မဖြစ်လာတာက သူ့အပိုင်းပေါ့။ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တောင်းလိုက်တဲ့ဆုတွေ ၁၀၀ မှာ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြည့်ဖို့များတဲ့ ကံကောင်းစေတဲ့လက်ဆောင်လေးတွေရှိပါတယ်။ကိုယ်မမြင်နိုင်ပေမဲ့အစွမ်းထက်တယ်ဆိုသလို ဒီလို magic charm လေးတွေက သင့်ဆန္ဒတွေ၊သင့်ဆုတောင်းတွေ ပြည့်လာဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။တကယ်ဟုတ်မဟုတ် စမ်းကြည့်ကြနော်။ကဲ ဒါဖြင့် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောတော့မယ်
ဒါက အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။လူတိုင်းမှာမသိစိတ်စွမ်းအားဆိုတာရှိတဲ့အတွက် သူ့အချိန်တန်တဲ့အခါထိရောက်မှုပိုရှိပါတယ်။သင်လုပ်ရမှာက ညအိပ်ရာမ၀င်ခင် စိတ်ထဲကနေ နက်နက်နဲနဲဆုတောင်းဖို့ပါပဲ။ပြီးရင် ကိုယ့်ဆုတောင်းတွေတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်း စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါ။
ဒိုင်ယာရီစာအုပ်နဲ့ဆုတောင်းကြည့်ပါ။ “Prayer diary”ဆိုတာမျိုးရှိပါတယ်တဲ့။သင်လုပ်ရမှာက ဒိုင်ယာရီစာအုပ်တစ်ခုကိုယူ၊ပြီးရင် အဲ့ဒီထဲမှာ သင့်ရဲ့ဆုတောင်းတွေတကယ်ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံချရေးပါ။ဥပမာ “ရုတ်တရက် ငွေတွေအများကြီးရလာပြီး လိုချင်တာတွေဝယ်ခဲ့၊စားချင်တာတွေစားခဲ့ရတယ်”
ဒါကတော့ အဖြူရောင်ငှက်မွှေးလေးတွေ့ရင်ဆောင်ထားဖို့ပါ။အဖြူရောင်ငှက်မွှေးရှာတွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုပေမဲ့ တွေ့လာခဲ့ရင် အဲ့ဒီငှက်မွှေးလေးကိုလက်ဖ၀ါးထဲထည့်၊ပြီးရင် “ငှက်မွှေးနတ်သမီးလေးရေ ကျွန်တော့်ဆန္ဒတွေခင်ဗျားကိုပို့လိုက်ပြီ”လို့ပြောပြီး ကောင်းကင်ပေါ်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါ။ကြားရတာ ကလေးဆန်ချင်ဆန်နေလိမ့်မယ်ဆိုပေမဲ့ ကိုယ်မမြင်ရတဲ့အရာ၊နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးပါ။ဒီငှက်မွှေးလေးကနေတစ်ဆင့် သင့်ဆန္ဒတွေကိုနတ်သမီးလေးတွေကြားသွားပြီးဖြည့်ဆည်းပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့။မယုံနိုင်စရာကောင်းပေမဲ့ ဒီဆုတောင်းနည်းလေးက အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။
ဒီဆုတောင်းနည်းလေးကတော့ အခုလက်ရှိကိုယ်ရောက်နေတဲ့အခြေအနေကို ပြောင်းလဲချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ။အုန်းဆီအနည်းငယ်ကို တံခါးလက်ကိုင်မှာသုတ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆုတောင်းကိုရွတ်ရင်းတံခါးကိုဖွင့်လိုက်ပါတဲ့။အဲ့ဒါဆို ကိုယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့တံခါးကနေ ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်လာမယ်လို့အယူအဆရှိပါတယ်။
ဒီတစ်ခါပြောမယ့်ဆုတောင်းနည်းကတော့ ကိုယ့်ဆုတောင်းက ဘယ်အချိန်ပြည့်ပြည့်ရတယ်၊စောင့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေမယ့်နည်းလေးပါ။တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာ ကိုယ့်ဆုတောင်းတစ်ခုချရေးပါ။ပြီးရင် ဘူးသေးလေးထဲထည့်ပါ။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း
ရေးပြီးအဲ့ဘူးလေးထဲပဲထည့်ရမှာနော်။အပတ်ရေများလာလေ ကိုယ့်မှာစွမ်းအားတွေပိုရှိလာလေဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ဆုတောင်းတွေပြည့်လာပါလိမ့်မယ်။တူညီတဲ့ဆုတစ်ခုတည်းကိုပဲ အပတ်တိုင်းချရေးရမှာနော်။
နောက်ဆုံးနည်းလမ်းလေးကလည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။အဖြူရောင်စာရွက်အစားငွေရောင်စာရွက်ကိုသုံးပေးရမှာပါ။ပီကေစားရင် ပါတဲ့ငွေရောင်စက္ကူလေးကိုယူထားလိုက်ပါ။ပြီးရင် အဖြူရောင်ဘက်ခြမ်းမှာ ကိုယ့်ဆုတောင်းလေးချရေးပြီး အဲ့ဒါလေးကိုသေချာသိမ်းထားပါ။ဒါက တကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားလို့ သံသယဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သင်သာ စူးစူးနစ်နစ်ယုံကြည်ထားမယ်ဆိုရင် ဒီငွေရောင်စက္ကူလေးကသင့်ဆုတောင်းကိုဖြည့်ပေးပါလိ့မ်မယ်။
ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်လေးတွေ၊အပြုအမူလေးတွေက ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကို ပိုပြီးဖြစ်ချင်လာအောင်ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ဘာရယ်မဟုတ်စိတ်ထဲဆုတောင်းလိုက်တာနဲ့စာရင် ဒီလို Charm လေးတွေလုပ်တာက ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကိုပိုပြီးပြင်းထန်စေပြီး ဆုတောင်းတွေတကယ်ဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့အတွက် စမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ကြပေါ့
ဆုတောငျးတိုငျးပွညျ့လား??လူတိုငျးက ဘဝမှာအနညျးဆုံးဆုတဈခုလောကျတော့တောငျးဖူးကွမှာပါပဲ။ဖွဈလာတာ မဖွဈလာတာက သူ့အပိုငျးပေါ့။ဒါပမေဲ့ ကိုယျတောငျးလိုကျတဲ့ဆုတှေ ၁၀၀ မှာ ၈ဝရာခိုငျနှုနျးလောကျပွညျ့ဖို့မြားတဲ့ ကံကောငျးစတေဲ့အရာလေးတှရှေိပါတယျ။ကိုယျမမွငျနိုငျပမေဲ့အစှမျးထကျတယျဆိုသလို ဒီလို magic charm လေးတှကေ သငျ့ဆန်ဒတှေ၊သငျ့ဆုတောငျးတှေ ပွညျ့လာဖို့ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။တကယျဟုတျမဟုတျ စမျးကွညျ့ကွနျော။ကဲ ဒါဖွငျ့ ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတာပွောတော့မယျ
ဒါက အရိုးရှငျးဆုံးနဲ့အထိရောကျဆုံးလို့ပွောလို့ရပါတယျ။လူတိုငျးမှာမသိစိတျစှမျးအားဆိုတာရှိတဲ့အတှကျ သူ့အခြိနျတနျတဲ့အခါထိရောကျမှုပိုရှိပါတယျ။သငျလုပျရမှာက ညအိပျရာမဝငျခငျ စိတျထဲကနေ နကျနကျနဲနဲဆုတောငျးဖို့ပါပဲ။ပွီးရငျ ကိုယျ့ဆုတောငျးတှတေကယျဖွဈလာပွီဆိုတဲ့အကွောငျး စိတျကူးယဉျကွညျ့ပါ။
ဒိုငျယာရီစာအုပျနဲ့ဆုတောငျးကွညျ့ပါ။ “Prayer diary”ဆိုတာမြိုးရှိပါတယျတဲ့။သငျလုပျရမှာက ဒိုငျယာရီစာအုပျတဈခုကိုယူ၊ပွီးရငျ အဲ့ဒီထဲမှာ သငျ့ရဲ့ဆုတောငျးတှတေကယျဖွဈလာတဲ့ပုံစံခရြေးပါ။ဥပမာ “ရုတျတရကျ ငှတှေအေမြားကွီးရလာပွီး လိုခငျြတာတှဝေယျခဲ့၊စားခငျြတာတှစေားခဲ့ရတယျ”
ဒါကတော့ အဖွူရောငျငှကျမှေးလေးတှရေ့ငျဆောငျထားဖို့ပါ။အဖွူရောငျငှကျမှေးရှာတှဖေို့မလှယျဘူးဆိုပမေဲ့ တှလေ့ာခဲ့ရငျ အဲ့ဒီငှကျမှေးလေးကိုလကျဖဝါးထဲထညျ့၊ပွီးရငျ “ငှကျမှေးနတျသမီးလေးရေ ကြှနျတေျာ့ဆန်ဒတှခေငျဗြားကိုပို့လိုကျပွီ”လို့ပွောပွီး ကောငျးကငျပျေါကိုမှုတျထုတျလိုကျပါ။ကွားရတာ ကလေးဆနျခငျြဆနျနလေိမျ့မယျဆိုပမေဲ့ ကိုယျမမွငျရတဲ့အရာ၊နားမလညျနိုငျတဲ့အရာတှအေမြားကွီးပါ။ဒီငှကျမှေးလေးကနတေဈဆငျ့ သငျ့ဆန်ဒတှကေိုနတျသမီးလေးတှကွေားသှားပွီးဖွညျ့ဆညျးပေးပါလိမျ့မယျတဲ့။မယုံနိုငျစရာကောငျးပမေဲ့ ဒီဆုတောငျးနညျးလေးက အလုပျဖွဈတယျလို့ပွောထားပါတယျ။
ဒီဆုတောငျးနညျးလေးကတော့ အခုလကျရှိကိုယျရောကျနတေဲ့အခွအေနကေို ပွောငျးလဲခငျြတဲ့သူတှအေတှကျပါ။အုနျးဆီအနညျးငယျကို တံခါးလကျကိုငျမှာသုတျလိုကျပါ။ပွီးရငျ ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့ဆုတောငျးကိုရှတျရငျးတံခါးကိုဖှငျ့လိုကျပါတဲ့။အဲ့ဒါဆို ကိုယျဖှငျ့လိုကျတဲ့တံခါးကနေ ကံကောငျးခွငျးတှရေောကျလာမယျလို့အယူအဆရှိပါတယျ။
ဒီတဈခါပွောမယျ့ဆုတောငျးနညျးကတော့ ကိုယျ့ဆုတောငျးက ဘယျအခြိနျပွညျ့ပွညျ့ရတယျ၊စောငျ့နိုငျတယျဆိုတဲ့သူတှအေတှကျအဆငျပွမေယျ့နညျးလေးပါ။တနင်ျဂနှနေတေို့ငျး စာရှကျတဈရှကျပျေါမှာ ကိုယျ့ဆုတောငျးတဈခုခရြေးပါ။ပွီးရငျ ဘူးသေးလေးထဲထညျ့ပါ။အပတျစဉျတနင်ျဂနှနေတေို့ငျး
ရေးပွီးအဲ့ဘူးလေးထဲပဲထညျ့ရမှာနျော။အပတျရမြေားလာလေ ကိုယျ့မှာစှမျးအားတှပေိုရှိလာလဖွေဈပွီး နောကျဆုံးမှာ ဆုတောငျးတှပွေညျ့လာပါလိမျ့မယျ။တူညီတဲ့ဆုတဈခုတညျးကိုပဲ အပတျတိုငျးခရြေးရမှာနျော။
နောကျဆုံးနညျးလမျးလေးကလညျးရိုးရိုးရှငျးရှငျးလေးပါပဲ။အဖွူရောငျစာရှကျအစားငှရေောငျစာရှကျကိုသုံးပေးရမှာပါ။ပီကစေားရငျ ပါတဲ့ငှရေောငျစက်ကူလေးကိုယူထားလိုကျပါ။ပွီးရငျ အဖွူရောငျဘကျခွမျးမှာ ကိုယျ့ဆုတောငျးလေးခရြေးပွီး အဲ့ဒါလေးကိုသခြောသိမျးထားပါ။ဒါက တကယျရောဟုတျရဲ့လားလို့ သံသယဖွဈနိုငျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ သငျသာ စူးစူးနဈနဈယုံကွညျထားမယျဆိုရငျ ဒီငှရေောငျစက်ကူလေးကသငျ့ဆုတောငျးကိုဖွညျ့ပေးပါလိ့မျမယျ။
ကံကောငျးစတေဲ့အဆောငျလေးတှေ၊အပွုအမူလေးတှကေ ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့ဆန်ဒကို ပိုပွီးဖွဈခငျြလာအောငျပံ့ပိုးပေးပါတယျ။ဘာရယျမဟုတျစိတျထဲဆုတောငျးလိုကျတာနဲ့စာရငျ ဒီလို Charm လေးတှလေုပျတာက ကိုယျ့ယုံကွညျခကျြကိုပိုပွီးပွငျးထနျစပွေီး ဆုတောငျးတှတေကယျဖွဈလာစနေိုငျတဲ့အတှကျ စမျးပွီးလုပျကွညျ့ကွပေါ့